Kenya oo hoggaaminaysa hawlgalada ilaalinta xeebaha Soomaaliya ! – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jun 21, 2019
Kenya ayaa hoggaamin doonta dalalka ka tirsan guddiga ka talo bixiyo howlgallada ka dhanka ah burcad badeeda xeebaha dalka Soomaaliya, Kenya waxay hoggaan u heyn doontaa guddigan muddo labo sanno ah laga bilaabo bisha Janaayo ee sannadka soo socda.
Dalalka xubinta ah guddiga la dagaallanka burcad badeeda xeebaha Soomaaliya ayaa waxay u doorteen Kenya inay hoggaamiso dadallada caalamiga ah ee ilaalinta xeebaha si dusha loogala socdo dhaqdhaqaaqyada amniga .
Arrintan ayaa kusoo hagaagaysa xilli Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeya muran xooggan oo ku saabsan dhul badeed ku yaala Koonfurta Soomaaliya.
Waxay arrintan fursad u siineysaa Kenya inay horkici karto dalalka gobolka iyo caalamka sidii looga hortaggi lahaa burcad badeeda oo dhibaato ku hayay maraakiibta isaga kala goosho gobolka inkasta oo hadda ay aad hoos u dhaceen howlaha burcad badeeda ay ka fulin jireen xeebaha Soomaaliya.
Go’aanka lagu soo doortay Kenya waxaa uu ka dambeeyay markii dalalka xubinta ka ah ururka la dagaallanka burcad badeeda ay shir ku qabteen magaalada Balaclava ee dalka Mauritius, sida uu bartiisa Facebook kusoo qoray Ababu Namwamba oo ah wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kenya.
Wasiirka gaashaandhigga Kenya,Raychelle Omamo oo ka hadleysay kulanka ka dhacay Mauritius ayaa waxay sheegtay in Kenya ay ka caawin doonto dhammaan waddamada ka tirsan ururka xiriirka la dagaalanka burcad baddeeda (CGPCS) sidii lagu xaqiijin lahaa in laga dhabeeyo dadaallada caalamiga ah ee lagu wiiqayo dhaqdhaqaaqyada burcad baddeeda xeebaha Soomaaliya iyo sidii sare loogu qaadi lahaa amniga badaha iyadoo ay socdaan howlgallada lagu kormeerayo xeebaha.
Xaaf oo Diyaaradaha duulimaadyada ku amray in aysan soo qaadi karin masuuliyiinta dowladda ee tagaya Galmudug
Kulan xasaasi ah oo u dhaxeeya Xaaf iyo Shaakir oo Goordhow soo idlaaday .